Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Infrared nke Ngwá Agha Ngwá Agha China Manufacturer
Nkọwa:Ngwongwo Sereti nke Cérati,Igwe nri chara chara nke Ceramic,Seremii na-ekpochapu ájá
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Sistem Na-ekpocha Ụlọ Ala Seram > Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Infrared nke Ngwá Agha Ngwá Agha
Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Infrared nke Ngwá Agha Ngwá Agha
Ihe Nlereanya.: XHC-F061
Ngwaahịa anyị na-enye gị nnukwu ihe ngwọta maka kpo oku n'ụzọ dị mfe ma dị mma. Anyị na-enye gị ọkụ ebe ọ kachasị mkpa maka nkasi obi ka mma.
N'ebe a na-ekpochapu sistema anyị, ị gaghị echegbu onwe gị banyere oyi na oyi. Anyị na-enye gị ngwaahịa dị mma n'ahịa asọmpi. Igwe ihe ọkụkụ a na-emepụta ihe ọkụkụ, nke a maara dị ka ihe ọkụkụ dị iche iche, nwere ọtụtụ uru.
Na-abanye na radiation infrared nke nwere ike ịgbasa arịa ọbara, na-edozi ahụrụ mgbu, mee ka mbelata ahụ mmadụ dị elu ma melite mmetụta nke usoro mgbasa ozi.
Ọnụ ọgụgụ ntọghata nke okpukpuchi nwere ike ịbụ ihe karịrị 90%
Ọnọdụ okpomọkụ na-ekesa n'ụzọ doro anya na ihe nkiri chase ọkụ.
Ebe obibi gburugburu ebe obibi:
Ihe na-ekpo ọkụ anyị ji eme ihe bụ ihe carbon nke na-emebighị gburugburu ebe obibi.
Emepụtala ihe ọ bụla na-emerụ ahụ, dịka nke ebulu mmiri ahụ.
Emepụtala anwụrụ ma ọ bụ mkpọtụ
Ejila ụlọ ájá ájá kpo oku
Na-achọ maka ụlọ , ọfịs , ọrụ nyocha nke sayensị, ebe ọ bụla a chọrọ kpo oku
Nguzogide mbido 293-358Ω, nkwụsi ike 322Ω
Ike 150W ± 10%
akwa voltaji na-eguzogide 3750V / 0.5mA / 2s
2. N'iji eriri nwoke na-arụ ọrụ ntanye ntanye, nkwụnye ụdọ ogologo 200 mm
3. Njikọ njikọ kwesịrị ka a glued, na-ekpo ọkụ gbazee ọnya mkpuchi
4. C na na 0.024 PET aluminum na-ekpuchi ihe nkiri
Sistem Na-ekpocha Ọkụ Akara Sere Kpọtụrụ ugbu a
Ngwá Agha Ngwá Agha Ngwá Agha A Na-ahazi maka Ngwọta Ahụhụ Mgbu Kpọtụrụ ugbu a
Ngwá Agha Ngwá Agha Maka Ngwá Agha Ụlọ Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke carbon carbon Kpọtụrụ ugbu a
2017 Nchekwa carbon carbon underfloor heater Kpọtụrụ ugbu a
Ngwurugwu kpochapu carbon na UL Kpọtụrụ ugbu a
Top 10 Warmers Kpọtụrụ ugbu a
Aka Warmer Onyinye Setet Kpọtụrụ ugbu a
Ngwongwo Sereti nke Cérati Igwe nri chara chara nke Ceramic Seremii na-ekpochapu ájá Ngwongwo Ugbo nke oma Ngwongwo ala nke infrared Ngwongwo nke anu ulo Ngwongwo Mgbasa Nusery nke Osisi Ngwongwo ndi na-ekpochapu mmiri